China Wooden uye yemishenjere bvudzi bhurasho fekitari uye vagadziri | Yongsheng
Rabha unhani bvudzi bhurasho nemavara ekudhinda zvaiti ...
UV yemagetsi, mvura yekuchinjisa, kupenya kudhinda bvudzi b ...
Rubha kupfeka, UV magetsi, kudhindisa kudhindisa, mvura ...
Rabha bemhapemha, mvura chinja, UV yemagetsi padhi ...
Professional kutenderera bvudzi bhurashi ine yakanyanya tembiricha ...
Mini bvudzi bhurasho nemavara erabha unhani, uv ele ...
Ruvara rabha kupfeka yakasarudzika bvudzi bhurashi pamwe dhizaini ...
Zvinhu: Lotus huni, beech, oak, Semi-charcoal bamboo, huni hune mavara, yakazara marasha bamboo
Ruvara: Natural bamboo uye huni hwehuni.
VO-001, BO-002, BO-003
Pre-kugadzirwa ------ sampuro ------ simbiso-Chinyorwa ------ kutenga-Prototyping ------ kugadzira-Rakaumbwa pedza-Hupenyu ------ kuongorora-pamusoro - ----- pedza-Hunhu ------ kuongorora-Cushion nemapini gungano-Hunhu ------ kuongorora -Packing
Lead Nguva: 45-60days.
Yakajairwa Package: Bhurasho rega rega riine rakavhurika nylon bhegi. 12PCS / yemukati bhokisi.120PCS / katoni.
Nzira yekubhadhara: 30% T / T dhipoziti pamberi, bhajeti yekubhadhara inopesana nekopi yeB / L mushure mekutumirwa.
Yakagadzirwa kubva kune yemhando yepamusoro organic bamboo huni, iri bango bhurasho rinouya neakawanda ezvisikwa zviwanikwa izvo zvinobatsira bvudzi rako. Kunhuwirira-kuramba uye zvakasikwa zvivakwa, rako bvudzi rinobatsira zvakanyanya bvudzi rako uchigara wakachengeteka kushandisa kune nharaunda.
Kuburitsa kunoitwa nemipendero yakapoteredzwa kunomutsa kuyerera kweropa mumusoro uye kunowedzera kukura kwebvudzi. Kunze kwezvo, iine yakawanda yeropa bvudzi follicles inowana kuwanda kwehutano, uye inogadzira yakawanda sebum. Zvinoreva kuti une bvudzi rakanyoroveswa. Nesimbi yaro yakapfava yemishenjere yakarongedzwa zvakaenzana pachigadziko chekupupa furo, uchafarira kukwesha bvudzi rako sezvo richipa chinozorodza uye chinozorodza nguva dzese pacho muromo wemabristles paunobata musoro wako. Bhurasho remushenjere rakavezwa nehunyanzvi nejecha. Mavara aro akajeka, akanaka uye akaomarara uye ane yakasarudzika yekubata. Natural bristle bvudzi bhurasho rakanakira kune ese bvudzi mhando (gobvu, dzakaonda, dzakanaka, dzakamonana, dzakatwasuka, refu, pfupi, nyoro, dzakaoma, dzine mafuta) uye kune vese varume, vakadzi uye vana.
Lotus huni, Beech huni, Oak, Semi-marasha yemishenjere, Mazimbe ese emushenjere, Ruvara huni zvese zviripo. Zvakare mbambo dzemishenjere, mapini emapuranga, bristles echisikigo zvese zvinogona kushandiswa mune aya echisikigo emusango emabhurashi. Isu tine yakajairika padhi bhurasho, oval bvudzi bhurasho, zvakare rakatenderedza nyanzvi bvudzi bhurasho.
Pashure: Wide-zino detangler muzinga neyakagadzikana mubato
Zvadaro: Yakakurumbira nyowani yemaitiro bvudzi bhurasho
Yakavezwa Wooden Bvudzi Brashi
Yakasarudzika Wooden Bvudzi Brashi
Goody Wooden Bvudzi Bvudzi
Paddle Wooden Bvudzi Brush
Wooden Round Bvudzi Brush
Wide-zino detangler muzinga neyakagadzikana mubato
Rabha kupfeka bvudzi bhurasho rine mavara anodhinda ...
Rabha unhani, UV emagetsi, shinning kudhinda, w ...
Mini bvudzi bhurasho ine mavara erabha kupfeka, iwe ...
Ruvara rweRabha kupfeka yakasarudzika bvudzi bhurashi ne de ...